FIVMPAMA Vakinankaratra: tosika ara-kevitra sy teknika ho an’ireo mpandraharaha vao misondrotra - Angisy
octobre 19, 2021 Les magistrats bénéficient d’un renforcement des capacités sur les normes internationales du travail
octobre 5, 2021 Ambohimanambola, Antananarivo : un déversement inquiétant près des stations de production et de traitement d’eau
septembre 28, 2021 Exposition photographique de TangalaMamy: représentation artistique du droit à l’image
septembre 28, 2021 ENMG-OIT : formation des magistrats et élèves magistrats sur les normes internationales du travail
septembre 2, 2021 Antsirabe : Fitokonana hamerenana amin’ny laoniny ny marikarama
août 2, 2021 Inspecteurs et contrôleurs du travail: formation spécifique sur la sécurité et la santé au travail du domaine des BTP
Home » Actualités » Economie » FIVMPAMA Vakinankaratra: tosika ara-kevitra sy teknika ho an’ireo mpandraharaha vao misondrotra
FIVMPAMA Vakinankaratra: tosika ara-kevitra sy teknika ho an’ireo mpandraharaha vao misondrotra
Manan-kevitra ny tanora, ary mila tosika sy torolalana avy amin’ireo manana traikefa amin’ny fandraharahana mba hivelarany. Sary: ©Zoll Rabe
Betsaka ny tanora no manan-kevitra hanangana orinasa, saingy mbola vitsy no tena mahatanteraka izany. Nikarakara hetsika ho fanomezana sehatra ireo fandraharahana vao miforona arak’izany ny Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy, FIVMPAMA, sampana Vakinankaratra
Manomboka mahasarika ny tanora eto Vakinankaratra ny fidirana amin’ny fandraharahana. Tsy mbola manana fahasahiana miseho sy miroso tanteraka anefa ny ankamaroan’izy ireo. Izany indrindra no nahatonga ny FIVMPAMA Vakinankaratra nikarakara ny “Journée Startup” tamin’ny sabotsy 3 jolay lasa teo tao amin’ny Le Rêve Antsirabe, hanomezana sehatra ireo fandraharahana vao niforona sy mitondra tolotra vaovao eo amin’ny tsena.
Tanora mpandraharaha sy orinasa vao misandratra manodidina ny 20 no nandray anjara tamin’izany. Fanamby hoy i Ny Aina Rakotonirina, filohan’ny Fivmpama Vakinankaratra, ny hanampy ireo mpandraharaha zandriny araka hevitra, teknika, amin’ny fampihaonana amin’ny mpiara-miombon’antoka ara-bola, ary ny fampivondronana azy ireo anaty fikambanana. Ny Fivmpama izay iray amin’ireo fikambanana mpandraharaha lehibe indrindra eto Madagasikara noho ny fananany mpikambana mahatratra 5.000 ankehitriny. Izany vondrona izany dia mety hahitan’ireto mpandraharaha zandriny ireto lalam-barotra ihany koa.
Manomboka ny asa, mivoatra
Nampiseho ny vokatra efa amidy eny amin’ny tsena ny mpandraharaha tanora Larissa Michèle Harilalaina (ankavia). Sary: ©Zoll Rabe
Anisan’ireo tanora mpandraharaha nampahafantatra ny orinasany sy ny famokarany tamin’ity hetsika ity i Larissa Michèle Harilalaina, izay vao nanokatra ny orinasany 7 volana monja izay. Efa niasa tamina orinasa maro izy taloha no nanapa-kevitra hanangana ny orinasany ka nanatanteraka ny tetikasa nanaovany fikarohana teny amin’ny sekoly politeknika, dia ny fanamboarana savony izany. Efa hita amin’ireo tsena sasantsasany eto Antsirabe ny vokatry ny orinasany amin’izao fotoana izao. Sarotra hoy izy ny fanombohana saingy tsy voatery hiandry hoenti-manana ampy vao miroso fa izay fitaovana kely teo am-pelantanany no nentiny nanomboka namokatra.
Maodely ho an’ireo tanora maro tonga nanatrika ny hetsika ireto mpandraharaha vao misandratra ireto hoy Razafiarison Andrianavalomanana, filoha nasionalin’ny Fivmpama. Manana fifanaraham-piaraha-miasa amina oniversite sy sekoly ambony miisa 5 ity fivondronan’ny mpandraharaha ity amin’izao fotoana izao, izaran’izy ireo ny traikefa mahakasika ny fandraharahana sy itaizana ny tanora hanana toe-tsaina mandraharaha izany.
Les magistrats bénéficient d’un renforcement des capacités sur les normes internationales du travail
Ambohimanambola, Antananarivo : un déversement inquiétant près des stations de production et de traitement d’eau
Exposition photographique de TangalaMamy: représentation artistique du droit à l’image
ENMG-OIT : formation des magistrats et élèves magistrats sur les normes internationales du travail
Antsirabe : Fitokonana hamerenana amin’ny laoniny ny marikarama
Les magistrats bénéficient d’un renforcement des capacités sur les normes internationales du travail octobre 19, 2021
Ambohimanambola, Antananarivo : un déversement inquiétant près des stations de production et de traitement d’eau octobre 5, 2021
Exposition photographique de TangalaMamy: représentation artistique du droit à l’image septembre 28, 2021
034 12 585 40 032 99 876 88
Copyright - Angisy 2018